မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၁၀ဝ ကျော်အနက် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် လူမျိုးစုမည်သည့်အခါကမှမရှိခဲ့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ ၌ ကျင်းပသည့် (၆၈)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေဆထွညီလာခံ၌ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ပြောကြား
(၆၈)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ တတိယကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့၌ ကျင်းပရာ မြန်မာ၊ ဆီးရီးယား၊ အီရန်နှင့် မြောက်ကို ရီးယား နိုင်ငံတို့၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အဆိုမူကြမ်းများကို အရေးယူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံဖြတ်ချက်အချို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ကန့်ကွက်ပြောကြားမှု များပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အဆိုမူကြမ်းများကို အရေးယူဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂသတင်းဌာနမှ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်အစည်းအဝေးသတင်းမှတ်တမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတိုး တက်ကောင်းမွန်လာမှုကို ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က တခဲနက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါကြောင်း "DELEGATES HAIL HUMAN RIGHTS IMPROVEMENTS IN MYANMAR AS THIRD COMMITTEE APPROVES 8 DRAFT RESOLUTIONS, INCLUDING4COUNTRY- SPECIFIC TEXTS" ခေါင်းစီးဖြင့် အလေးပေးဖော် ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အဆိုမူကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ တတိယကော်မတီ၌ အရေးယူ ဆုံးဖြတ်သည့် အချိန်တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးပြောကြားသူအချို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် စီးပွား ရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး အနာဂတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလားတူအဆိုမူကြမ်းအား တတိယကော်မတီတွင် တင်သွင်းမှုကို အဆုံးသတ်ကြရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်း လည်းသိရသည်။ အဆိုမူကြမ်းကို ကော်မတီကမဲမခွဲဘဲ အတည်ပြုချမှတ်ပြီးနောက် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအမြဲ တမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်တင်က ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်ပါရှိသည့် ရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုဟူသည့် စကားအသုံးအနှုန်းကို ယခင်ကာ လများအတိုင်း ဆန့်ကျင်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၁၀ဝ ကျော် နက် ထိုကဲ့သို့သော လူမျိုးစုတစ်စု မည်သည့်အခါကမျှ မရှိခဲ့ပါကြောင်း။ အကြမ်းဖက်မှုများပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား လူမျိုးဘာသာမခွဲ ခြားဘဲ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကို အရေးကြီးဆုံးအချက် အဖြစ် တင်ပြလိုပါကြောင်း၊ မကြာခင်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ အိုအိုင်စီအဖွဲ့၏ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရောက်ရှိချိန်တွင် အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကို ရပ်တန့်ရန်၊ ပြည်သူလူထု အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် လူ့အခွင့် အရေးနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များအား အပြည့်အဝ လေးစားလိုက် နာစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်တို့အတွက် အာမခံကြောင်း ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု မတူညီသူအချင်းချင်း စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုများ အားပေးမြှင့်တင်ရန်နှင့် လူသားချင်းစာ နာထောက်ထားမှု အထောက်အပံ့များ ကို ပေးအပ်ရေးတို့ကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ တို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ အိုအိုင်စီအဖွဲ့လာရောက် ခွင့်ပြုခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ယခုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေ ရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း နှင့် ဆက်ဆံရေးအတွက် အသင့်ရှိသည်ကိုမြန်မာ နိုင်ငံက ပြသ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် ရပိုင်ခွင့်များ ရယူ အသုံးပြုမှုကဲ့သို့သော တည်ဆဲဥပဒေအောက်တွင်ရှိသည့် လုံခြုံရေးအခြေအနေများနှင့်အညီ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေအရ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းကို ရွေးချယ်၍ ညီလာခံတွင် တရားဝင်တင်ပြပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုကို ကန့်ကွက် ပါကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အစီရင်ခံစာအဖွဲ့(UPR) သည်သာ နိုင်ငံတိုင်း တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို မျှတစွာဖြေရှင်းရမည့် တစ်ခုတည်းသော စောင့် ကြည့်သည့် ယန္တရားဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အားပေး မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည် ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန် စစ်မှန်သော စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုနှင့် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေခံများပေါ်တွင် အခြေခံသင့်သည်ဟုလည်း မိမိတို့ယုံကြည်ပါကြောင်း။ ကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်း ပါ မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်း၏ အရေးကိစ္စကို တင်ပြခြင်းအား ကုလသမဂ္ဂ၏ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုအောက်တွင် ဆက်လက်ထားရှိခြင်းမပြုသင့်ပါကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအထူးသံတမန်၏ တရားဝင်လေ့လာ စုံစမ်းမှုကို အဆုံးသတ်ရန်အချိန်ကျရောက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင် ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင် မှုနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိကဝတ် ပြုထားမှုကို ကြိုဆိုသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ တနိုင်ငံစာရှိတဲ့ ရေခဲပြင်ကြီး အန္တာတိကတိုက်မှ ကွဲထွက်လာ
အရှည် ၂၁ မိုင်၊ အကျယ် ၁၂ မိုင်ရှိတဲ့ ရေခဲပြင်ကြီးဟာ အန္တာတိကတိုက် ပိုင်းအိုင်လန် ပင်လယ်ကွေ့ကနေ ကွဲထွက်လာတဲ့ပုံတွေကို အမေရိကန်အမျိုးသားအာကာသအေဂျင်စီ (နာဆာ)က နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ပြသခဲ့တယ်။
ရေခဲပြင်ကြီး မကွဲထွက်ခင်ကပုံတွေနဲ့ ကွဲထွက်လာပြီး အာကာသဓာတ်ပုံတွေ
ဒီအက်ကွဲမှုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကတည်းက နာဆာရဲ့ “အော်ပရေးရှင်း အိုင့်စ်ဘရစ်ခ်ျ” အဖွဲ့က သတိထားမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ဇူလိုင်လပုံတွေမှာတော့ ရေခဲပြင်ကြီးဟာ သိသိသာသာ ကွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ဘီ-၃၁ လို့ခေါ်တဲ့ ရေခဲပြင်ကြီးဟာ ကုန်းမြေကနေ သပ်သပ်ကွဲထွက်လာပြီး ရွှေ့လျားနေပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင် တစ်စုဟာ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၇၀၀ရှိတဲ့ ရေခဲမျက်နှာပြင်ကြီး ဘယ်အရပ်မျက်နှာဘက်ကို ရွေ့လျားမယ်ဆိုတာ ဂြိုလ်တုကပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ လိုက်လံတွက်ချက်နေကြပါတယ်။
တရုတ်အမျိုးသားများနှင့် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရန် စည်းရုံးခေါ်ဆောင်လာသူအား ဖမ်းဆီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သာယာတောင်ရပ်ကွက် မိတ္ထီလာ-မန္တလေး ကားလမ်း၌ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး
ရဲတပ်ဖွဲ့စု (မိတ္ထီလာ)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် သတင်းအရ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်
ယာဉ်အမှတ် ၁ခ/......မှန်လုံယာဉ်အား သက်သေများနှင့်အတူ ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ယာဉ်ပေါ်တွင် တရုတ်ပြည်၌ အလုပ်လုပ်ရန်၊ တရုတ်အမျိုးသားများနှင့်လက်ထပ်ယူရန် လိုက်ပါလာသည့်
မိတ္ထီလာမြို့နေ မ..... (၃၉) နှစ်ပါ နှစ်ဦးအားတွေ့ရပြီး ၎င်းတို့အား မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သာယာရပ်ကွက်နေ မ.....(၃၄)နှစ်မှ စည်းရုံးခေါ်ဆောင်လာကြောင်း သိရသဖြင့် မိတ္ထီလာမြို့နယ် အမှတ် (၃)နယ်မြေ ရဲစခန်းက လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားသည်။
ဇနီးဖြစ်သူအိမ်ပေါ်မှဆင်းသည်ကိုမကျေနပ်၍ သမီး ၂ ဦးအားဓါးဖြင့်ထိုးပြီး ကိုယ်တိုင်ဆွဲကြိုးချသေ
၂၃-၁၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၈၀၀ အချိန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ သပြေ၀ ကျေးရွာတွင် လူသတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရ မိတီ်္ထလာအမှတ်(၃)နယ်မြေရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ စစ်ဆေးချက်အရ ၎င်းကျေးရွာနေ မင်းဦး(၃၀)နှစ်မှ သမီးများဖြစ်သည့် မသင်းနုဝေ(၆)နှစ်နှင့်မမေမြတ်နိုးဦး(၉)နှစ်တို့အား ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့သဖြင့် မသင်းနုဝေမှာ ၀ဲရင်အုံထိုးသွင်း ဒဏ်ရာ(၁)ချက်ရရှိပြီး အခင်းဖြစ်နေရာတွင်သေဆုံးသွားကြောင်း၊ မမေမြတ်နိုးဦးတွင် ၀ဲရင်အုံထိုးသွင်း ဒဏ်ရာ(၁)ချက်ရရှိပြီး မင်းဦးမှာလည်း နေအိမ်ထုတ်တန်း၌(၅)မူးလုံးခန့်ရှိ အစိမ်းရောင်နိုင်လွန်ကြိုးဖြင့် ကြိုးဆွဲချသေဆုံးလျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် မိတီ်္ထလာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ပိ်ု့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ စုံစမ်းချက်အရ မင်းဦးသည် ဇနီးဖြစ်သူနေအိမ်မှဆင်းသွားသည်ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်ကာ သမီး(၂)ဦးအား ဓါးဖြင့်ထိုး၍ ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးဆွဲချသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသောကြောင့် မင်းဦးအား မိတီ်္ထလာ အမှတ်(၃)နယ်မြေရဲစခန်း(ပ)၁၁၃/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၆ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ်(၈/၂၀၁၃)ဖြင့်လည်းကောင်း အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထားဝယ်စီမံကိန်းမှ အီတာလျံ-ထိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းခွင်များ ရပ်ဆိုင်းခဲ့မှုကြောင့် မြန်မာလုပ်သားများ အခက်တွေ့နေ
(ထားဝယ်စီးပွားရေးဇုန် အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းခွင် တစ်နေရာအား တွေ့ရစဉ်)
ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းမှ စီမံကိန်း အဓိက တည်ဆောက်သူ အီတာလျံ-ထိုင်း ကုမ္ပဏီသည် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်မှ နောက်ဆုံးထား ထွက်ခွာနေပြီး ထိုင်းလုပ်သား အများစုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာနေပြီး ဆိုက်အတွင်းရှိ မြန်မာလုပ်သားများကိုမူ ကျန်ရှိသည့် အလုပ်ခွင်သို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် လုပ်ငန်းခွင်အမှတ် J.1973 (Early Township တွင် လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်သမားများကို အလုပ်ခွင်မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သဖြင့် အခြားဆိုက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးရမည် ဖြစ်သော်လည်း ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်း မရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အလုပ်ရပ်ဆိုင်းခဲ့မှုအတွက် အလုပ်သမားများ ရရှိမည့် လုပ်ခကျန်ငွေနှင့် အလုပ်ရပ်ဆိုင်းသည့်အတွက် နစ်နာကြေး ရရှိလိုကြောင်း အလုပ်သမားများမှ လက်မှတ်ထိုး၍ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ အသနားခံ တင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်ကစပြီး ဦးတို့ကို အလုပ်ဖြုတ်ခဲ့တယ်။ ၁၃ နဲ့ ၁၆ ကီလိုမီတာဆိုက်က အလုပ်သမား ၁၂၀ ကိုပါ။ ၁၈ ရက်က ဦးတို့ကို ITD ဆိုက်က အလုပ်သမား တာဝန်ခံက အလုပ်ခွင် ရပ်နားတော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးတို့ကို အခြားအလုပ်ဆိုက် ပြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီး လာပြောပါတယ်။ ဦးတို့ကို ပြောင်းပေးမယ့် အလုပ်ဆိုက်က ဦးတို့ကို လက်ရှိနေထိုင်ရတဲ့ အခြေအနေအတိုင်း မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ပြောပါတယ်။ ဦးတို့ရစရာရှိတဲ့ ဒီလအတွက် လစာငွေကို ပေးဖို့ပြောတော့ နောက်လ ၆ ရက်နေ့မှ ပေးနိုင်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ပြောင်းပေးမယ့် အလုပ်ဆိုက်မှာ အရင်လို ထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးရင်တော့ ဆက်လုပ်မယ်။ မပေးရင်တော့ ဦးတို့အတွက် နစ်နာကြေးလို ချင်တယ်။ အခု လက်မှတ်ထိုးပြီး တောင်းဆိုထားတယ်" ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြန်အောင်မြို့မှ လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမား ဦးသိန်းစိုးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အလုပ်သမားများ အလုပ်ခွင်မှ ရပ်နားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ "မြန်မာအလုပ်သမားများကို အလုပ်ဖြုတ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ညှိနှိုင်းနေဆဲပါ။ ရှေ့ဆက်သွားမယ့် အစီအစဉ်တွေ ရှိသေးတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကုမ္ပဏီက သုံးလပဲ နားမှာပါ" ဟု ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားများနှင့် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရန် စည်းရုံးခေါ်ဆောင်လာသူအား ဖမ်းဆီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သာယာတောင်ရပ်ကွက် မိတ္ထီလာ-မန္တလေး ကားလမ်း၌
လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့စု (မိတ္ထီလာ)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် သတင်းအရ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၁ခ/......မှန်လုံယာဉ်အား သက်သေများနှင့်အတူ ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ယာဉ်ပေါ်တွင် တရုတ်ပြည်၌ အလုပ်လုပ်ရန်၊ တရုတ်အမျိုးသားများနှင့်လက်ထပ်ယူရန် လိုက်ပါလာသည့် မိတ္ထီလာမြို့နေ မ..... (၃၉) နှစ်ပါ နှစ်ဦးအားတွေ့ရပြီး ၎င်းတို့အား မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သာယာရပ်ကွက်နေ မ.....(၃၄)နှစ်မှ စည်းရုံးခေါ်ဆောင်လာကြောင်း သိရသဖြင့် မိတ္ထီလာမြို့နယ် အမှတ် (၃)နယ်မြေ ရဲစခန်းက လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မိထ္ထီလာအရေး၊ ရခိုင်အရေး ကိစ္စများနှင့် ပက်သက်၍တချို့ က ဗုဒ္ဒဘာသာအပေါ်ကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်သည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အမျိုးစောင့်ဥပဒေကို ကန့်ကွက်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း
စွတ်စွဲဝေဖန်ကြသည်ကို အခြေခံပညာနည်းသော နယ်ဒေသများနှင့် လူမှု့ရေးဝက်ဆိုဒ်များတွင် အချို့ သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် စာဖြန့်ဝေခြင်း၊ ၀ါဒဖြန့် မှိုင်းတိုက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြသည်။
ဘာသာရေး နှင့် ပက်သက်၍ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ
ပြဋ္ဌာန်းချက်အချို့ မှာ မဖြစ်မနေသိသင့်သည်ဟု ယူဆ၍
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၁။ အရ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များသည်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိစေရ-
(စ) နိုင်ငံရေး ကိစ္စအတွက် ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြု၍ ဆန္ဒမဲပေးရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဆန္ဒမဲ မပေးရန်သော်လည်းကောင်း၊
ပြောဆိုခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ယင်းသို့ပြုလုပ်ရန် အားပေးလှုံ့ ဆော်ခြင်းပြုသူ သို့မဟုတ် ယင်းသို့ ပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်သူ။ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ဘာသာရေး၊ကိစ္စအတွက် အာမခံခြင်း၊ ကာကွယ်ပြောဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက
ဥပဒေနားမလည်သော နိုင်ငံသားများ သဘောကျမည်ဖြစ်သော်လည်း တကယ်တန်း ပါတီဥက္ကဌတာဝန်ယူထားသော သူမအနေဖြင့်
ပြောဆိုပါကလက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပုဒ်မ ၂၁၂ (စ)အရ နောက်တစ်ကြိမ်
ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
ဤအချက်ကို မသိရှိသည့်နိုင်ငံသားတို့အပေါ် အခွင့်အရေးယူလျှက်
အခြားတဖက်တွင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားဘာသာရေး နှင့် လူမျိုးရေးအရထိုးနှက်သောစာများ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း
များကိုရည်ရွယ်ချက်ရှီရှိ ပြုလုပ်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
အခြေခံဥပဒေနားမလည်သော ၊ မဖတ်ဖူးသော ပြည်သူများနှင့် သံဃာတော်မျာသည် အဆိုပါ မှိုင်းတိုက်မှုများကို အမြင်မှား၊ အထင်မှားခဲ့ပြီးယှဉ်ပြိုင်ဖက်များ၏ နို်င်ငံရေးအရအသုံးချမှုခံနေကြရသည်မှာ လက်တွေ့ပင်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သဘောထားကို ထုတ်ပြောလျှင် ပုဒ်မ ၂၁၂(စ) အရ စွပ်စွဲရန် အရန်သင့် ရှိနေသည်။ မည်သည့်အဖွဲ့အသင်းမှ စွပ်စွဲမည်ကိုလည်း အလွယ်တကူစဉ်းစား သိရှိနိုင်သည်။
အကယ်၍ ယခုကဲ့သို့ ဥပဒေအားလိုက်နာပြီး ဆက်လက်၍ဘာသာရေး
ကိစ္စတွင် ချိန်ဆ ပြောဆိုခြင်းမရှိပါက ပြည်သူများအနေဖြင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် နားလည်ပေးနိုင်ရန်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအားသေချာကျနစွာ ဖတ်ရှူ့လေ့လာရန် လိုအပ်သည်။
သို့မှသာ အာဏာရူးများ၏ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွင် အသုံးချခံရခြင်းမှ
ထို့ပြင် ပုဒ်မ ၄၀၇။ (ဃ) အရ
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ရပ်သည် အောက်ပါအကြောင်းတစ်ခုခုနှင့် ညိစွန်းလျှင် ဆက်လက် ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိစေရ-
(ဃ) ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် အလွဲသုံးစားပြုခြင်း
အရ အကယ်၍ ပါတီဥက္ကဌဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က '' ကျမလဲ မြန်မာလူမျိုး ၊ ဗုဒဘာသာပါဘဲ ရှင်၊
အမျိုးစောင့်ဥပဒေကို ထောက်ခံပါတယ်ရှင့် ။ '' ဟု ဆိုသော် ကြိုတင်ကြံစည်ထားသော အာဏာရူးဝိုင်းတော်သားများမှ
ဒါမှ ဒို့မေမေ ကွ၊ ဟေး ဒါမှ အောင်ဆန်းစုကြည် ဟေး ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အခြားတဖက်တွင် ဒါ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး
လူထုထောက်ခံမှုကို ရအောင်ယူတာဘဲ ပုဒ်မ ၄၀၇ (ဃ) အရ ပါတီပါဖျက်သိမ်းရသည်အထိ ပြင်းထန်စွာ
ပြဋ္ဌာန်း ထားသည်ကို မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ဖတ်ရှူ့ ဖူးခြင်းမရှိသော ဘာသာရေး
စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သည့် ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ တမင်သွေးထိုး လှုံ့ဆော်သူများကြောင့် စကားကျွံရပါသော ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ ရှင်လူ ပရိတ်သတ်နိုင်ငံသားများသည်လည်း နိုင်ငံရေးအရ ဆင်ထားသော ထောင်ချောက်ကြီးကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်မှာ
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအား ဖတ်ရှူမှ သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ပုဒ်မ ၃၆၄ အရ
နိုင်ငံရေး ကိစ္စအလို့ငှာ ဘာသာသာသနာကို အလွဲသုံးစားမပြုရ။ ထို့ပြင် လူမျိုးရေး၊ ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်
သော်လည်းကောင်း တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် တစ်ဂိုဏ်းနှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းတစ်မျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာ၇န်အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် ဤ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအပြုအမူမျိုးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။
အထက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အကယ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ဘာသာရေးနှင့် ပက်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊
လူမျိုးရေးနှင့် ပက်သက်၍ သော်လည်းကောင်း
မြန်မာနှင့် ဗုဒဘာသာ ဘက်မှ ပြောဆိုပါက နဂိုကမှ ကြည်ညိုလေးစားရင်း
ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် လူထုခေါင်းဆောင်သည် အခြားအကွက်ဆင်ဖမ်းချင်သူများ၏ အကွက်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်၍ အဆင်မပြေလျှင်ပြစ်ဒဏ်ပါ ကျရောက်နိုင်သော အမျိုးသားရေး
ထောက်ချောက် အတွင်းသို့ပင် ကျရောက် ပျက်စီးနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ရနိုင်သည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ဘီးလင်းမြို့ နယ်တွင် ၊ လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအား ဘာသာရေး နှင့် လူမျိုးရေးအရ ထိုးနှက်သည့် စာများဖြန့်ဝေထားပြီး အချို့ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သည်တချီလဲပြီ ဟု အာဘောင်အာရင်း
သန်သန်ဖြင့် မှိုင်းတိုက်နေသည်ကိုလည်း ကြားသိရသည်။
အချို့ မှာ သံဃာတော်များနားသို့ ပေါက်အောင် ဒေါ်စုအနေဖြင့် ဘာသာရေး ကာကွယ်ပေးမှု ပျက်ကွက်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ကန့်ကွက်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း
စသည်ဖြင့် ပြောဆိုမှိုင်းတိုက်မှုများရှိနေသည်ကို ကြားသိရသည်။
၂၀၁၅ မှာ နီးလာပြီဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထုအားပေးမှုအများဆုံးရှိသော ပါတီမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအရ ထိုးနှက်ချက်များ တွင် အခြေခံဥပဒေနားမလည်သော
ရိုးသားသော ပြည်သူလူထုနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများအား အခွင့်အရေးယူပြီး
မိမိတို့နှင့်ဆိုင်သော ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို မဖြစ်မနေ ဖတ်ရှူ လေ့လာရန်
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ မှာ မူကြမ်းရေးဆွဲစဉ် အတည်မပြုမီကပင်
ပြည်သူအားလုံး၏ မျက်စိရှေ့ သို့ရောက်ရန် ချပြရှင်းပြမှုပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထို့ ပြင် အတည်ပြုပြီး နှစ်နှစ်အကြာ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ ကမှ အုပ်ရေ ၅၀၀၀ သာ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၂ တွင် အုပ်ရေ ၁၀၀၀၀ ထပ်မံထုတ်ဝေသည်။ ထုတ်ဝေသည့်အရေအတွက်နှင့် နိုင်ငံသားအားလုံးအချိုးမှာ
မမျှတသည်ကလည်း ပြည်သူတို့ အခြေခံဥပဒေလေ့လာရန် အခက်အခဲကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံသားတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆင်ထားသော
ထောင်ချောက်များအတွင်းသို့ သက်ဆင်းမသွားစေ၇န် လည်းကောင်း၊
နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများ ၏ လှည့်ကွက်တွင် အသုံးချခံမဖြစ်စေ
ဆန္ဒပြုလျှက် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအား ပြည်သူအများသိရှိအောင် ကူညီ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါစေကြောင်းဖြင့်
Posted From ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး
ဟင်းနု နယ်ရွက်မှ ရရှိသော ကျန်းမာရေး အကျိုး ကျေးဇူးများ
(၁) သွေတိုး ရောဂါ ရှိသူ များအတွက် အထူး ပင်ကောင်းမွန် ပါတယ်။
(၂) ကင်ဆာ ရောဂါ ကိုလည်း ကာကွယ် နိုင်ပါတယ်။
(၃) အသား အရေကို လှပ စေပါတယ်။
(၄) အရိုး များကို သန်မာ စေပါတယ်။
(၅) အမြင် အာရုံ ကိုလည်း ကြည်လင် စေပါတယ်။
(၆) ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း ရောဂါ များကို သက်သာ စေနိုင် ပါတယ်။
(၇) အားအင် များလည်း ပေးစွမ်း နိုင်ပါတယ်။
(၈) အဆီ ကိုလည်း ကျစေ နိုင်ပါတယ်။
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄
၂၃-၁၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၇၂၀ အချိန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မေဃဂီရိရပ်ကွက်၊ လမ်း(၈၀)(၁၇-၁၈)လမ်းကြား ကျုံးအတွင်းလူတစ်ဦး သေဆုံးနေကြောင်း သတင်းအရ အောင်မြေသာစံ အမှတ်(၂) နယ်မြေ ရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ သက်သေများနှင့်အတူသွားရောက်စစ်ဆေး ခဲ့သည်။ စစ်ဆေး ချက်အရ သေဆုံးနေသူမှာ မရွှေဇင်ဖြိုး(ခ)စကီ(၂၀)နှစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖုန်းဆက်ရန်ထွက်ခွာ သွားရာမှ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိကြောင်း၊ မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ခြူး(၅၈)နှစ်၏ပြောပြချက်အရ သိရှိရပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ပြင်ပဒဏ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရှိရသောကြောင့် မန္တလေးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ကာ အောင်မြေ သာစံ အမှတ်(၂)နယ်မြေရဲစခန်း၊ သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၆၃/၂၀၁၃) ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အကျဉ်းကျ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းများကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သတ်မှတ်မည်မဟုတ် ဟုဆို
တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက်တွင် အကျဉ်းချခံခဲ့ရသော ထောက်လှမ်းရေး ဟောင်းများကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အဖြစ် မသတ်မှတ်ရန် လက်ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီက ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ယင်းကော်မတီဝင် ဦးရဲအောင်က ပြောကြားသည်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ (Myanmar Peace Center) ၌ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော (၁၀) ကြိမ်မြောက် လက်ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် အထက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွှတ်ပေးရေး အတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များကို စိစစ် ပေးနေသော်လည်း အကျဉ်းထောင်များ အတွင်းရှိ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ၂၁ ဦးကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟု သတ်မှတ် မည်မဟုတ်ကြောင်း ၄င်းကရှင်းပြသည်။
"နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တွေကို ဦးစားပေးနေပါတယ်၊ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ကိုတော့ သာမန်လူတွေလို နှစ်ရှည်လများ ကျနေတဲ့သဘောနဲ့ စဉ်းစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်" ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ထောက်လှမ်းရေးများကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များဟု သတ်မှတ်ခြင်း မရှိသော်လည်း လူသားချင်းစာနာမှုဖြင့် သီးခြားလွှတ်ပေးရန် အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ အကြံပြုလွှာ ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လက်ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီ ထံမှ သိရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အကျဉ်းထောင်များ အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မကုန်မီ လွှတ်ပေးမည်ဟု ကတိပြု ပြောဆိုထားသော်လည်း လက်ရှိအနေအထားတွင် နိုင်ငံရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ အစိုးရက ဖမ်းဆီးနေသည့်အတွက် ထပ်မံ အကျဉ်းကျ ခံရသောကြောင့် အကျဉ်းသား ၁၇ ဦး ထပ်မံ တိုးမြင့်လာကြောင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း AAPP မှ ဦးဘိုကြည် ကပြောကြားသည်။
"ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း တိုးလာတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို စိစစ်ပြီးနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ထား ပါတယ်" ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ၁၂ ကြိမ် လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး အကျဉ်းသား ၁၃၀၀ ကျော် လွတ်မြောက်ခဲ့ကာ အကျဉ်းထောင်များ အတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၈၀ ကျော် ကျန်ရှိနေကြောင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက် များအရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဦးခင်ညွှန့်ကလည်း အကျဉ်းကျ ထိန်းသိမ်းခံနေရသော ထောက်လှမ်းရေးတပ်မှူး များကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်ကြည်က နိုဝင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်း ကျင်းပသော တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဦးခင်ညွန့် အပါအဝင် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် များကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ပြီးနောက် တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
ပူပြင်းနေသော နေမင်းကို အန်တု၍ ပီကေတစ်ရှုးအပါအဝင် မုန့်မျိုးစုံထည့်ထားသည့် ကော်ခြင်းတောင်း အပြာရောင်လေးအား လည်ပင်းတွင် စွပ်ကာ အဝတ်အစား ခပ်နွမ်းနွမ်းဝတ် ဆင်ထားပြီး မျက်နှာညှိးငယ်စွာဖြင့် ထိုင်နေသော အသက်၄၀ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့် ရှိသည့် ဈေးသည် တစ်ဦးသည် ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ပြေးဆွဲနေသော ကူးတို့ဆိပ်ခံဘော တံတားအနီးတွင် ထိုင်နေသည်။
ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ပြေးဆွဲနေသော ကူးတို့ဆိပ်ခံဘောတံတားနှင် ကူးတို့ပေါ်တွင်ခရီးသည်များအကြား မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ကူးတို့နှင့်ဆိပ်ခံတံတားကမ်းအကပ်အခွာတွင် အသက်အန္တရာယ်ကို မမှုနိုင်ဘဲပျားပန်းခတ်မျှလှုပ်ရှားရုံးကန် ရောင်းချနေကြသော ဈေးသည် များ၏ အသံများသည် တိတ်ဆိတ်နေသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့တွင် စတင်အရေးယူခဲ့ခြင်းကြောင့်
“ကျွန်တော်တို့ ခုဒီသဘောင်္ပေါ်မှာ ဈေးရောင်းချခွင့် မရှိတော့ဘူး
ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို မှီခိုနေတဲ့ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ မသိတော့ပါဘူး။ နေ့သွင်းကြေးတွေလည်း ဘယ်လိုပေးရမလဲ မသိတော့ဘူး”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒလ
မြို့နယ်မှ ပန်းဆိုး တန်း-ဒလကူးတို့ပေါ်တွင် မုန့်မျိုးစုံ လာရောက်
ရောင်းချနေသူ ဦးနီ(အမည်လွှဲ) က ပြောကြားသည်။
ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ပြေးဆွဲနေသော ကူးတို့နှင့်ဆိပ်ခံတွဲပေါ်များ
ပေါ်တွင် ဈေးရောင်းချနေသူများအား နိုဝင်ဘာလ၂၁ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ပြည် တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာန၏ ဥပဒေများ အတိုင်းအရေးယူ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ
လက်မှတ် အရောင်းဌာနမှ မန်နေဂျာ ဦးအေးမြင့်က
“ကျွန်တော်တို့လည်း လူသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
အရင်က ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်တာက ခရီးသည်တွေလည်း စားသောက်ရတာ လွယ်ကူအောင်လို့ ဈေးသည်တွေကို စနစ် တကျ လေးရောင်းချစေချင်တာ မလိုက်နာကြတော့ ခုလိုတွေ
ဆောင်ရွက်ရတာပါ” ဟု ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
ကူးတို့နှင့် ဆိပ်ခံဘောတံတားပေါ်တွင် ဈေးရောင်းချခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းကြောင့် ယင်းကူးတို့ပေါ်တွင် မှီခိုရောင်းချ
နေသော ဈေးသည် ၂၀၀ ကျော်၏ မိသားစု စားဝတ်နေရေး
အတွက် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ဒလဆိပ်ကမ်းတွင်
ရှိသော သမဝါယမမှ ကူးတို့ပေါ်တွင် ရောင်းချနေသော ဈေးသည်
များကို အတိုးနှုန်းသက်သာသော ချေးငွေများဖြင့် ချေးဌားကာ
ရောင်းချနေရသောကြောင့် ယင်းချေးငွေများ ပြန်ဆက်ရန်
အတွက် အခက်အခဲများစွာနှင့်လည်း ကြုံတွေ့နေရကြောင်း
ကူးတို့ပေါ်တွင် စာရေးကိရိယာ ရောင်းချနေသော ကိုတင်ဝင်းနိုင်က ပြောကြားသည်။
“ခုကျွန်တော်တို့ ဈေးသည်တွေ တော်တော်လေး အခက်
အခဲနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ငုံးဥကြက်ဥရောင်းတဲ့သူတွေ
လည်း မနေ့က ပုပ်ကုန်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ငွေချေးပြီး ရင်းရတဲ့သူတွေဆိုတော့ ခုဆိုရင် စားဖို့ထက် အကြွေးတင်နေ တာကို ပြန်ဆက်ဖို့ အရင်ပူနေရတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်
ကူးတို့ပေါ်တွင် ရောင်းချနေသော ဈေးသည်အများစုသည် တစ်ဦးရောင်းချ၍ ရရှိသော ငွေများကို အချင်းချင်းအပြန်
အလှန် လှည့်ပတ်ကာ ရင်းနှီး ရောင်းချနေကြသူများဖြစ်ပြီး
ကူးတို့ပေါ်တွင် စည်းကမ်းတကျ ရောင်းချသူများကို ပြန်လည်
ရောင်းချခွင့်ပေးစေလိုကြောင်း ကူးတို့ပေါ်တွင် ရာင်းချနေသော
“ ဒီသဘောင်္ကြီးက အန်တီတို့ရဲ့ ထမင်းအိုးကြီးပါ။ ခုလို မရောင်း ရတော့ဘူးဆိုတော့ အန်တီတို့ ဘယ်သူကို အားကိုးရမလဲ။
ဒီပေါ်မှာ အရင်း လေး ငါးထောင်လောက်နဲ့ ရင်းပြီး ရောင်းလို့ ရပေမယ့်အပြင် ဈေးတွေကို မတိုးနိုင်ဘူး။ အန်တီတို့က နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်ရှိပြီ။ ဒီမှာ ရောင်းနေတာဖြစ်လို့ အပြင်ဈေးတွေမှာ
လည်း မရောင်းတတ်တော့ဘူး” ဟု ကူးတို့ပေါ်တွင် နှစ်ပေါင်း
၄၀နီးပါး အထည်ရောင်းချနေသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကူးတိုနှင့် ဆိပ်ခံဘောတံတားများ ပေါ်တွင်ဈေးရောင်းချခြင်းကို တားမြစ်ရခြင်းသည် ဈေးသည်များ၏ အသံများ ဆူညံခြင်း၊
ဈေးသည်များ ဘက်မှ ခရီးသည်များအပေါ် မချေမငံပြန်လည်
ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်မှစတင်၍ ဈေးရောင်းချနေသူ
များ၏ ပစ္စည်းများကို ဆိပ်ကမ်းမကပ်မီအထိ သိမ်းဆည်းထား မည် ဖြစ်ကာမရောင်းချရန် သတိပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယ အဆင့်အဖြစ် ဒဏ်ငွေကျပ်၅၀၀၀ ကောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်အရောင်းဌာနမန်နေဂျာ ဦးအေးမြင့်က ပြောကြား
“ဈေးသည်တွေက ဆူတာတွေလည်း ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်
လည်း သူတို့ တစ်ဝမ်းတခါးဆိုတော့လည်း ပြန်ပြီး ရောင်းခိုင်း
စေချင်ပါတယ်။ စည်း ကမ်းမရှိတဲ့ ဈေးသည်တွေကို အရေးယူပြီး စည်းကမ်းတကျ ရောင်းခိုင်းစေချင်တယ်” ဟု ပန်းဆိုးတန်းမှ ဒလကူးတို့ နေ့စဉ်ပုံမှန် စီးနင်းနေသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပန်းဆိုးတန်း-ဒလကူးတို့ တွင် နေ့စဉ်ုပည်တွင်းခရီးသည်
နှစ်သောင်းကျော်စီးနင်းပြီး နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် ရှစ်ဆယ်
နီးပါးခန့် စီးနင်းလျက် ရှိကြောင်း ပြည်တွင်းရေကြောင်း
“ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်ပြီးရောင်းချခွင့်ပေးပါ။ ကူညီပေးမယ့်
သူတွေလည်း မရှိပါဘူး။ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ သူတွေမရှိဘူးလို့ မပြောလိုပါဘူး။ စည်းကမ်း မရှိတဲ့သူတွေကို သီးသန့်အရေး
ယူပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ရောင်းချခွင့်ပေးပါ။ မှီခိုနေတဲ့ သားသမီးလေးတွေအတွက် ဒီမှာမှ မရောင်းရရင် ဒုက္ခရောက်ရပါလိမ့်မယ်”ဟု ဦးနီ(အမည်လွှဲ) က ပြောကြားသည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးကို စီမံချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်
နေမှုများ ရှိနေသော်လည်း ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နေမှုများ
သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူများအတွက် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေ
နိုင်ကြောင်း ဈေးသည်အများစုက တညီတ
သားအမိချင်း စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား ဓားဖြင့်ခုတ်သူ
အင်းစိန်မြို့ နယ် အောင်ဆန်းရပ်ကွက် သီဟိုဠ် ကျောင်းလမ်းနေ အသက် (၂၉)နှစ်ရှိ မောင်ဝေဇော်အောင်သည် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်က မိခင် ဒေါ်ညိုနှင့် စကားများရာ မိခင်ဖြစ်သူက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ဇေယျာမင်းအား သွားရောက်တိုင်ကြားစဉ် မောင်ဝေဇော်အောင်သည် မိခင်ဖြစ်သူနောက်သို့ ဓားကိုင်ဆောင်ပြီး လိုက်လာပြီး ရုံးခန်းအတွင်းသို့ဝင်ကာ တာဝန်ထမ်းဆာင်နေသူ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားဓားဖြင့်ခုတ်ပြီး ထွက်ပြေးသွား၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆယ်အိမ်မှူးများက ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီး ရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိအောင် ဓားဖြင့်ခုတ်၍ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတစ်ဦးအား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းက ပုဒ်မ-၃၃၃ ဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူထားသည်။
ဓားဖြင့်အခုတ်ခံရသူမှာ ဦးခေါင်း၊ နားရွက်၊ လက်များတွင် ဒဏ်ရာ ၁၄ ချက်ရရှိသွားပြီး အင်းစိန်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့၍ ဆေးကုသမှုခံယူလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း နားဆင်ဖို့ အကောင်းဆုံး သီချင်း ၁၀ ပုဒ်
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းကိုလူကြီး၊လူငယ် အသက်အပိုင်းအခြားမရွေးကစားလာကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုသီချင်းသံစဉ်နဲ့ စည်းချက်ညီညီလိုက် ကစားရင် ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်စေမှာပါ။ ဒီတော့ ဒီဂျေ ခရစ် လောဟွန် (DJ Chris Lawhorn) ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်း ၁၀ပုဒ် နဲ့တက်တက်ကြွကြွ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ကြပါစို့ ။
Bruce Springsteen – Two Hearts (Live)
Huey – Pop, Lock, & Drop It
The Smiths - You Just Haven’t Earned It Yet, Baby
Coldyplay – In My Place
ဒီ၁၀ပုဒ် အပြင် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင်ခန်းဆော့ကစားသူတွေ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးနဲ့နားဆင်လို့အကောင်းဆုံး သီချင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာကတော့ Kelly Clarkson ရဲ့I Do Not Hook Up ဆိုတဲ့ သီချင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီ ကောလိပ်၊ ကောလိပ် ပထမနှစ်သင်တန်းများ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ဖွင့်မည်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီကရီ ကောလိပ်၊ ကောလိပ်အသီးသီး၏
ပထမနှစ် သင်တန်းများကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် သင်တန်းဝင်ခွင့်ရသူများ စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီ ကောလိပ်၊ ကောလိပ် အသီးသီး တွင် ကြေညာထားသည်။
ဒုတိယနှစ်နှင့် အထက် သင်တန်းများအားလုံးကို ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်မှ စတင်ကာ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ် အသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းမှုတွင် မီးလောင် ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာရရှိသော သံဃာရှစ်ပါးကို ဂုဏ်ပြုမည်
မုံရွာ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း နယ်မြေ ဝက်မှေးရွာဟောင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းခံရမှု တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် လက်ပံတောင်း တောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရမှု၌ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည့် သံဃာရှစ်ပါးအား ဗုဒ္ဓကုရဆု (ဘုရားလောင်း သူရဲကောင်းဆု) ပေးအပ်ချီးမြှင့် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ဝီရသူက မိန့်ကြားသည်။
“သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းခံရမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သံဃာတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ချီးမြှင့်တာပါ။ သံဃာရှစ်ပါးကိုတော့ ဘုရားလောင်း သူရဲကောင်းဆု ချီးမြှင့်ပြီး ကျန်တဲ့ သံဃာတွေကိုလည်း ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဆုတံဆိပ်၊ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်နဲ့ ဝတ္ထုငွေတွေ ပေးအပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်” ဟု ဆရာတော်က ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။
ဝက်မှေး ရွာဟောင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းခံရမှု တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူမြို့မှ သံဃာတော်များကို ပင့်ဖိတ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ၂၄ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမှ သံဃာတော်များ ဝက်မှေးရွာဟောင်းသို့ ရောက်ရှိ လာမည် ဖြစ်ကာ ဆရာတော်များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝက်မှေးရွာမှ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းက ပြောကြားသည်။
“သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့တော့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး။ အခုလို အထိမ်းအမှတ်ပွဲလေးပဲ ရွာဟောင်းမှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ” ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြား သည်။
သံဃာတော်များအား ချီးမြှင့်မည့် ဆုတံဆိပ်တွင် ဘုရားအလောင်း မျောက်မင်း ဘဝပုံကို သစ်သားဖြင့် သရုပ်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ဘုရားအလောင်း မျောက်မင်းဘဝ ဘုရင့် ဥယျာဉ်တော်အတွင်း ဝင်ရောက်ကြစဉ် ဘုရင့်တပ်က လက်နက်များဖြင့် ဝိုင်းသည့်အခါ၊ ခါးတွင် နွယ်ကြိုးချီ၍ ခုန်ကူးပြီး တစ်ကိုယ်စာ လိုသဖြင့် ၎င်းကိုယ်တိုင် သစ်ကိုင်းကို ဆွဲ၍ တံတားသဖွယ် ခင်းပေးပြီး မျိုးနွယ်တူအဖွဲ့ သားများကို ဖြတ်သန်း သွားလာစေကာ အသက်စွန့်ခဲ့သည့် မျောက်မင်းကို ပုံဖော်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ဦးဝီရသူက မိန့်ကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား လာရောက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်း သံဃာတော်များနှင့် ဒေသခံများက သပိတ်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ လက်ပံတောင်းတောင်အရေး တောင်းဆို ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ရာ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့တွင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရပြီး ယင်း ဖြိုခွင်းမှုတွင် ပြင်းထန်စွာ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့် ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ၊ ဦးပညာဝုဓ၊ အရှင်ရာဇိန္ဒ၊ အရှင်ဝိသုတ၊ အရှင်သုစိတ္တ၊ အရှင်ခေမာဝုဓ၊ ကိုရင်သဇ္ဇနတို့အား ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျွန်မသည် (၂. ၁၁. ၂၀၁၃) ရက်နေ့က ယာဉ်တိုက်မှုဖြင့် သေဆုံးသော မောင်အောင်စိုးဦး၏ မိခင်အရင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုနေ့က မောင်အောင်စိုးဦးသည် နံနက်ပိုင်း ပိုက်မှလာသောရေကို ကျောက်စည်ထဲသို့ ရေဆွဲထည့်နေစဉ် မျိုးဝင်းအောင်၊ အောင်ဟိန်း တို့မှ သင်ပုန်းဆည်သို့ ငါးမျှားသွားရန်ခေါ်သဖြင့် လိုက်ပါသွားခဲ့ပါသည်။ ညနေ ၆ နာရီအချိန်ခန့်တွင် သရက်အုပ် အလွန် ၌ ဆိုင်ကယ်ချင်းတိုက်မိကြောင်း ကျွန်မ၏သားမှာ ၄င်းနေရာ၌ပင် သေဆုံးသွားကြောင်းကို ဖုန်းဖြင့် မောင်အောင်ဟိန်းမှ သူ၏မရီးဖြစ်သူထံ အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
သေဆုံးသူနှင့်လူနာများအား ရန်အောင်မြင်နာရေးကားဖြင့် (၁) ဦးလှဝင်း (၂)ဦးဘူးသီး (၃) ကိုသိန်းထွန်းအောင် (သေဆုံးသူ၏ယောက်ဖ) တို့ ၃ ဦးသယ်ယူခဲ့ပါသည်။၄င်းကားပေါ်တွင် အခင်းဖြစ်ချိန်က ဆိုင်ကယ်မောင်းလာသူမှာ မျိုးဝင်းအောင် ဖြစ်ပြီး အလယ်မှထိုင်သူမှာ အောင်ဟိန်းဖြစ်၍ နောက်ဆုံးမှစီးလာသူမှာ ကျွန်မ၏သား အောင်စိုးဦးဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ၄င်းကားပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသူ ဦးလှဝင်းမှာ ၄င်း၏မိန်းမဖြစ်သူနှင့် မျိုးဝင်းအောင်တို့မှာ အမျိုးများတော်စပ်သဖြင့် အမှန်တကယ် ဆိုင်ကယ်မောင်းလာသူမှာ မျိုးဝင်းအောင်ဖြစ်သော်လည်း သေဆုံးသူအောင်စိုးဦးစီးသည်ဟု လိမ်ညာထွက်ဆိုရန် တိုင်ပင်နေသည်ကို ကိုသိန်းထွန်းအောင်မှ ကြားသိခဲ့ရပြီး ရင်ခွဲရုံသို့ အလောင်းပို့သောအခါမှာလည်း သေဆုံးသူမှာ ဦးလှဝင်းမှ ၄င်း၏ယောက်ဖတော်စပ်ကြောင်း လိမ်ညာပြောဆို၏ ရင်ခွဲရုံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ အလယ်တွင်ထိုင်သူအောင်ဟိန်းမှာ ခါးကျိုးပြီး အူခွဲစိတ်ရပါသည်။ ဆိုင်ကယ်မောင်းသူ မျိုးဝင်းအောင်မှာ ဒူးတစ်ဖက် ဂုံညင်းရိုးကွဲသည်ဟုသိရပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်စီးနင်းလာသူ ကျွန်မ၏သား အောင်စိုးဦးသည် နေရာ၌ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
သေဆုံးသူ အောင်စိုးဦးတွင် ဇနီးဖြစ်သူ စောစန္ဒာလင်း(ခ) မိစံနှင့် သားတစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆိုင်ကယ်မောင်းသူမျိုးဝင်းအောင်မှာ ကျွန်မ၏ချွေးမ စောစန္ဒာလင်း(ခ) မိစံ၏ ဦးလေးဝမ်းကွဲတော်စပ်ပါသည်။ ကျွန်မသား၏ နာရေးရက်လည် (၈.၁၁.၂၀၁၃) ရက်နေ့ပြီးဆုံးသည့် အချိန်က ချွေးမဖြစ်သူမှာလည်း သေဆုံးပုံအား ရေရေရာရာ ပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် အလည်တွင်ထိုင်၍ ဒဏ်ရာရရှိ သွားသော မောင်အောင်ဟိန်းအား သွားရောက်မေးမြန်းသောအခါမှ မျိုးဝင်းအောင်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးလာသူဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ ကျွန်မသားမှာ နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာသည်ဟု တိတိကျကျသိခဲ့ရပါသည်။
မောင်အောင်ဟိန်းမှပြောပြသည်မှာ သင်ပုန်းဆည်မှာ ငါးမျှားသည်။ ညနေပြန်လာသောအခါ အောင်စိုးဦးမှ မောင်းသည်ဟု သိခဲ့ရပြီး ဆိုင်ကယ်ချိန်းကြိုးပျက်သဖြင့် ဆိုင်မှာဝင်ရောက်ပြင်ဆင်နေစဉ် မျိုးဝင်းအောင်နှင့် အောင်ဟိန်းတို့မှ အရက်သောက်ကြပြီး၊ အောင်စိုးဦးမှာ မိန်းမနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းသင်းသည်မှာမကြာသေးသည့်အပြင် စည်းခုံကြီးရပ်ကွက်ရ၌ခံဝန်ကတိဖြင့် အရက်မသောက်ရန် လက်မှတ်ထိုးထားသူဖြစ်သောကြောင့် အချိုရည်တစ်ဘူးနှင့် ပေါင်မုန့်တစ်လုံးသာ စားသည်ဟု သိရပါသည်။ အရက်ဆိုင်မှ စားသောက်ပြီးအထွက်တွင် သေဆုံးသူအောင်စိုးဦးက \_"မင်းတို့အရက်သောက်ထားတာ မူးနေပြီ၊ ငါမောင်းမည်\_" ဟု ပြောသောအခါ မျိုးဝင်းအောင်မှ \_"ငါ့ဆိုင်ကယ်အကြောင်း ငါပဲသိတယ် ၊ မမောင်းနဲ့\_" ဟုဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်ကို ကိုယ်တိုင်မောင်းခဲ့ပါသည်။ မျိုးဝင်းအောင်မှ ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးနောက် ထွက်လာကြရာ သရက်အုပ်မရောက်ခင် ပေတရာ မော့တက်လေးတွင် ဆိုင်ကယ်ချင်းတိုက်မိ၍ ကျွန်မသား အောင်စိုးဦးမှာ နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ မောင်အောင်ဟိန်းမှ \_"အောင်စိုးဦးစီးရင် ဒီလိုဖြစ်မှမဟုတ်ဘူး ၊ မျိုးဝင်းအောင် အရက်သောက်ပြီးစီးလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာ၊ အောင်စိုးဦးကိုအရမ်းသနားတယ်\_" ဟုပြောပြသဖြင့် ကျွန်မ ဇာတ်လမ်းစုံသိခဲ့ရပါသည်။ အိမ်နီးချင်းများကလဲ အောင်ဟိန်းကို လူနာလာမေးသောအခါ အောင်ဟိန်းက အထက်ပါပြောခဲ့သည့် အတိုင်းပင် ပြောပြခဲ့ပါသည်။
(၁၆. ၁၁ ၂၀၁၃) နေ့တွင် မောင်အောင်ဟိန်း ၏ ဇနီးဖြစ်သူ စန္ဒာထွေးမှ ကျွန်မအိမ် သို့ ရောက်ရှိလာပြီး မောင်အောင်စိုးဦး အရက်သောက်စား မူးရူးပြီး ကိုယ်တိုင်စီး၍ သေဆုံးသွားကြောင်း လိမ်လည်ထွက်ဆိုရန်အတွက် အမှန်တစ်ကယ် ဆိုင်ကယ်မောင်းသူ၏ အမ မမြရီမှ လာရောက် ပြောကြား သည့်အပြင် သေဆုံးသူ ဇနီး စောစန္ဒာလင်း၏ ဦးလေးတော်စပ်သူ ဦးလှဝင်း မှလဲ အလယ် တွင်ထိုင်၍ လိုက်ပါလာသော အောင်ဟိန်း ၏ နေအိမ်သို့ သွား ရောက်ပြီး ယခုအမှုအား အမှန်အတိုင်း မပြောရန် ၊ ပြောခဲ့လျှင် လျော် လည်းလျှော်ရမည် ၊ ထောင်လည်းကျမည် ဟု ခြိမ်းခြောက် စကားပြောခဲ့ ကြောင်း ပြောပြသဖြင့် ကျွန်မ သိခဲ့ရပါသည် ။
အထက်ပါကိစ္စရပ်များအား အဖြစ်မှန်ကို ဖုံးကွယ်၍ လိမ်လည် ထွက်ဆို နေကြ သည်ဟု ကျွန်မသိရသဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသော အမှတ် (၁) ရဲစခန်းကို သွား ရောက်စုံစမ်း ခဲ့ပါသည် ။ ထိုနေ့က စခန်းမှုး နှင့် မတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် (၂၁.၁၁.၂၀၁၃) နေ့တွင် ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ရာ စခန်းမှုးနှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ရပြီး အမှုကို အမှန်အတိုင်းပေါ်ပေါက်ရန် စစ်ပေးမည်ဟု ပြောပြပါသည်။ စခန်းမှ ပြန်လာပြီး အဖြစ်အပျက် အမှန်အတိုင်း ထွက်ဆိုသူ မောင်အောင်ဟိန်း အိမ်သို့ ထပ်မံသွားရောက်သော အခါ အခြား တစ်ဖက်မှ တိုက်ခဲ့သောဆိုင်ကယ်မှ တရားစွဲထားတယ်ထင်လို့ အမှန်အတိုင်း ထွက်မည်ဟု ပြောခဲ့ကြောင်း ၊ ယခုအခါ ထိုသို့ မဟုတ် သဖြင့် ဆေးရုံမှ ထွက်ဆိုထားသည့် အတိုင်း လိမ်လည်၍ ထွက်ဆို မယ် ၊ အမှန်အတိုင်းမပြောနိုင်ဘူး ၊ ကြိုက်သလိုလုပ် ဟု ပြောပြပါသည်။
ကျွန်မသားဖြစ်သူ အောင်စိုးဦးမှာ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း မရှိသည့် အပြင် အမှန်တစ်ကယ် ဆိုင်ကယ်မောင်းခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အသေဆိုးဖြင့် သေရသည့်ကိစ္စ တွင် ကျွန်မ၏သားအား အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းသည်ဟု လိမ်လည်ထွက်ဆိုနေကြသဖြင့် နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ရင်ထဲတွင် ခံစားနေရပါသောကြောင့် အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ရန် အတွက် စစ်ဆေးပေးပါရန် တိုင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်မြတ်မွန် (ဘ) ဦးမြင့်သန်း
၉/စကတ (နိုင်) ၀၁၁၆၉၉
စက်ကြီးဆည်မြောင်း ၊ ၀န်ဇင်းရပ်ကွက်
ကသာ နိုဝင်ဘာ - ၂၄
ကသာခရိုင်၊ ၀န်းသိုမြို့နယ်၊ မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု၊ မယ်ဇလီကျေးရွာနေ ဒေါ်နှင်းနွယ်ဦးသည် (၂၉၈)ကြိမ်အောင်ဘာလေထီ သိန်း (၁၅၀၀)ဆုပေါက်သော်လည်း ထီလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၀)ရက် ၀န်းကျင်ခန့်က အသက်(၂၀)ခန့် လူငယ် (၂)ဦး မှ ဆိုက်တွဲ (နံပါတ်မသိ) ဖြင့် သီချင်းဆို၍ ရွာစဉ်လှည့်လည် ထီရောင်းချသူများထံမှ ဓ -၈၆၅၅၄၈ ဂဏန်းအပါအ၀င် (၅)စောင်တွဲထီအား တစ်စောင်လျှင် (၈၀၀ိ/-)ကျပ်နှုန်းဖြင့် (၄၀၀၀ိ/-)ကျပ်ဘိုးထီထိုးခဲ့သည်။
၄င်းထီလက်မှတ်အား အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပြီးသော်လည်း ထီပေါက်စဉ်ဖြင့် မတိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘဲ ထီလက်မှတ်ရောင်းသူများက (၄-၁၁ ၂၀၁၃)ရက် နှင့် (၇-၁၁-၂၀၁၃) ရက်တို့တွင် လာရောက် မေးမြန်းကြောင်း အိမ်နီးနားချင်းများမှ ပြောပြခဲ့သည်။ ၁၀-၁၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ၄င်းထီရောင်းချသူများမှ ထီလက်မှတ် ထီ ပေါက် မပေါက်တိုက်ပေးမည်၊ ယခုလည်း (၂၉၉)ကြိမ်ထီလက်မှတ် အစောင် (၂၀)အား လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
(၂၉၈)ကြိမ် ဓ-၈၆၅၅၄၈ ပါသော ထီ (၅)စောင်အား မသိအောင်ယူဆောင်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပြန်လည် ထွက်သွားခဲ့သည်။
ထီရောင်းချသူများ ထွက်သွားပြိး သတိရချိန်တွင် (၂၉၈)ကြိမ် ဓ-၈၆၅၅၄၈ ပါ ထီလက်မှတ်များ မရှိတော့ ကြောင်း သိရပြီး ဆွေမျိုးမိသားစုနှင့် တိုင်ပင်၍ ထီပေါက်စဉ်ဝယ်၍ ထီတိုက်သောအခါ သိန်း (၁၅၀၀)ဆုပေါက်မှန်း သိရသည်။
သို့ဖြစ်၍ ၀န်းသိုမြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထိန်မင်း ထံ အကူအညီ တောင်းခံပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ပါရန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနသို့ အောင်ဘာလေ သိန်း (၁၅၀၀) ဆု ထုတ်ပေးခြင်းအား တားမြစ်အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် တိုင်တန်းထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း နေပြည်တော်တွင် လူစုလူဝေးဖြစ်မည်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစိုးရိမ်
နေပြည်တော်- ဆီးဂိမ်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အကြိုဗိုလ်လုပွဲနှင့် ဗိုလ်လုပွဲကျင်းပမည့်ရက်များတွင် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များမှ ပရိသတ်များကို ရထား၊ ကားဖြင့် နေပြည်တော်သို့လာရောက်ရန် စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း နေပြည်တော်တွင် လူစုလူဝေးကြီးဖြစ်မည်ကိုမူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင့်ဆန်းက စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့ စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် ရထားများကို ဘောလုံးပွဲစဉ်နှင့် အချိန်ကိုက်ပြေးဆွဲပေးရန် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်က သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆပ်ကော်မတီကို မှာကြားသွားခဲ့သည်။ “ဒီမှာသောင်တင်ကျန်ရစ်ခဲ့ရင်တော့ နေပြည်တော်မှာ တော်တော်အန္တရာယ်များသွားနိုင်ပါတယ်”ဟု ဇေယျာသီရိအားကစားရုံတွင် ကျင်းပသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ ၎င်းကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမှ ထွက်ခွာလာမည့်ရထားများကို နေပြည်တော်သို့ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမစတင်မီ နှစ်နာရီခန့်ကြိုတင်ရောက်ရှိရန် အချိန်ကိုက်ဝင်လာရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ နေပြည်တော်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် ရထားများမှာလည်း ဘောလုံးပွဲတွင် အချိန်ပို၊ ပင်နယ်တီများရှိလာနိုင်၍ ပြန်ထွက်ခွာချိန်ကို နာရီနှင့်သတ်မှတ်ခြင်းထက် ပွဲပြီးမှသာ ထွက်ခွာသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပုံမှန်အချိန်သတ်မှတ်ပြီး ထွက်ခွာလျှင် ဘောလုံးပွဲပြီးချိန်နှင့် တိုင်ပင်လွဲပြီး နေပြည်တော်၌ ပရိသတ်များသောင်တင်နေမည်ကို ၀န်ကြီးကစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်သည်။
“သူခိုးကြီးညကလည်း တော်တော်ပျက်စီးသွားတယ်”ဟု ၀န်ကြီးကပြောသည်။
ဆီးမီးဖိုင်နယ်ကို မြန်မာဘောလုံးအသင်း တက်ရောက်မည်ဟု ယုံကြည်ထားသည့်အတွက် ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမှ ပရိသတ်များလာရောက်အားပေးနိုင်ရန် ရထား၊ ကားများဖြင့် စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများက တရားဝင်ကြေညာထားသည်။
သို့ရာတွင် ဧည့်သည်ပရိသတ်များနှင့် ဒေသခံပရိသတ်များ စုစည်းမိပြီး အနုတ်သဘောဆောင်သောဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို တာဝန်ရှိသူများက စိုးရိမ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ဘုရားကြီး ရဲစခန်းအပိုင်၊ ပဒေသာ(၂)ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်းနေ ဦးသောင်းအေး(၆၂)နှစ်၊ (ဘ)ဦးစိန်အေး၏ မြို့မစားသောက်ဆိုင်နှင့်KTVဆိုင်တွင် (၂၃.၁၁.၂၀၁၃)နေ့ ည(၆း၀၀)အချိန်ခန့်ကမီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ် ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မြို့မစားသောက်ဆိုင်သည် သစ်သားညှပ်၊ အုပ်ကာ၊ သွပ်မိုးဖြင့် တည်ဆောက်ထား သော အခန်းအမှတ် R5မှ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ၄င်းအခန်းနှင့်ကပ်လျှက် ဖြစ်သော စတိုခန်း၊ စက်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ခန်း၊ လူနေခန်း R3၊R4အခန်းများပါ မီးကူးစက် လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး မီးညွှန့်မှာ ခေါင်မိုးအထက်(၄)ပေခန့်အထိ မြင့်တက်သွားပြီး တိုင်းမီးသတ်ဦးစီးမှူး ရဲသူရိန် လှမြင့်ဦးစီး၍ ဘုရားကြီးမီး သတ်ဌာနမှ မီးသတ်ကား(၂)စီး၊ ဝေါမီးသတ်ဌာနမှ မီးသတ်ကား(၂)စီး၊ ပဲခူးမီး သတ်ဌာနမှ(၄)စီး စုစုပေါင်းမီးသတ်ကား(၈)စီးနှင့် မီးသတ်သန္ဂေ/အရန်အင်အား(၃၆)ဦးတို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာ ည(၆း၄၅)အချိန်တွင်မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပြီး ကာလတန်ဖိုးငွေ စုစုပေါင်း(၁၆၅၀၀၀၀ိ/)(ဆယ့်ခြောက်သိန်းငါးသောင်း)ကျပ်ခန့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားပြီး လျှပ်စစ်အား မဆင်မခြင်သုံးစွဲသူ ဦးသောင်းအေးအား ဘုရားကြီးရဲစခန်းမှ (ပ)၁၅၅/၂၀၁၃ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၈၅(မီးကိုပေါ့လျှော့စွာ သုံးစွဲမှု ကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း)အရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မန္တလေးတွင် လုယက်မှုသုံးမှု ဆက်တိုက်ဖြစ်၊ အမှုနှစ်မှုမှ တရားခံများ အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဖမ်းမိ
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃
မန္တလေးမြို့တော်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က နေရာသုံးနေရာ၌ လုယက်မှု သုံးမှု ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အချိန်ပိုင်းအတွင်း အမှုနှစ်မှုမှ တရားခံများကို ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မန္တလေးမြို့တော် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ပြည်ကြီးမျက်ရှင် ရပ်ကွက် (၆၃x၃၁) လမ်းထောင့် နယူးစီပီလိုင်း ဈေးတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်တွင် သားငါးရောင်းသူ၏ ပိုက်ဆံအိတ်အား အမျိုးသမီးနှစ်ဦးက ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဆွဲယူထွက်ပြေး သွားသဖြင့် သတင်းအရ နယ်မြေခံ ရဲစခန်းက လိုက်လံ စုံစမ်းစစ်ဆေးရာ ယင်းနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၂၆x၆၃ လမ်းထောင့်၌ ပိုက်ဆံအိတ် လုယူ ထွက်ပြေးသွားသည့် အဆိုပါ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးကို သက်သေခံ ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ မယဉ်တိုး ၂၂ နှစ်နှင့် မစန္ဒာ ၃၈ နှစ်တို့ကို ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အမှတ် (၃) ရဲစခန်းက (ပ) ၄၆၄/၂၀၁၃ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၈၂ အရ အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း အဆိုပါ ရဲစခန်းထံမှ ထပ်မံသိရှိရသည်။
ယင်းအပြင် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ အချိန်ခန့်က အောင်မြေသာစံမြို့နယ် အနှိပ်တော်ရပ်နေ ဒေါ်ဝါဝါထွေး ၄၂ နှစ်သည် ၆၆ လမ်းအတိုင်း ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်လာစဉ် ဆိုင်ကယ် စီးလာသူ အမျိုးသားနှစ်ဦးက ၎င်း၏ ပိုက်ဆံအိတ်အား လုယူ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ တရားခံများအား တစ်နာရီအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ မြင့်မြတ်ကောင်း (၂၂ နှစ်) နှင့် ချမ်းမြေ့သိန်း (၂၄ နှစ်) တို့ကို အောင်မြေသာစံမြို့နယ် အမှတ်(၁) ရဲစခန်းက (ပ) ၂၀၂/၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၈၂ အရ အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေကြောင်း နယ်မြေခံ ရဲစခန်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မဟာအောင်မြေမြို့နယ် (၆၆x၄၀) လမ်းထောင့်တွင်လည်း နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ အချိန်တွင် မခင်မာမြင့် ၃၆နှစ် (တောင်သူ)၊ နောင်ချိုမြို့နယ် နေသူသည် လမ်းဘေးတွင် ဖုန်းဖြင့် ဂိမ်းကစားနေစဉ် လော့ဂျား ပန်းဆီရောင် ဆိုင်ကယ် စီးလာသည့် အမျိုးသားနှစ်ဦး ၎င်းအနီးသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဆိုင်ကယ်နောက်မှ စီးလာသူက မခင်မာမြင့်၏ လက်ကိုင်ဖုန်းအား ဆွဲယူ ထွက်ပြေး သွားခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဖုန်းဆွဲယူ ထွက်ပြေးသွားသူ နှစ်ဦးအား မဟာအောင်မြေ မြို့မရဲစခန်းတွင် (ပ) ၇၇၈/၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၈၂ အရ အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး တရားခံ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးသည့် ယင်းအမှုကို စုံစမ်းဖော် ထုတ်နေကာ အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် မျက်မြင်သက်သေများ အနေနှင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်း ပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“မန္တလေးမှာက ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်းနဲ့ကို ကြုံရင်ကြုံသလို ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဆွဲပြီးပြေးတယ်။ ဆွဲကြိုး ဖြတ်ပြေးတယ်။ လူရှုပ်တဲ့နေရာတွေ၊ ဈေးတွေမှာ ဆိုရင် ခဏခဏ ကြားနေရတယ်။ ပိုက်ဆံအိတ် ပျောက်လို့ ရဲစခန်းကို သွားပြီး အမှုဖွင့်တယ်။ နောက်ပိုင်း ဘာထူးလဲလို့ မေးတယ်။ ဘာမှမထူးဘူး” ဟု ပိုက်ဆံအိတ် လုယက်ခံရမှု ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့သူ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက် ၄၀ နှစ်ခန့်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဆိုသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံရောက် ရွှေမြန်မာများအား အထူးအသိပေး အပ်ပါသည်။ (အရေးပေါ် သတင်း)
ဒီနေ့ (၂၄.၁၁.၂၀၁၃) တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီကျော်မှ စတင်၍ ကေအယ်ကို
တာရာယာ မိုင်ဒင်းဖက် နှင့် မြန်မာဆိုင်တန်း ဖက်များတွင် အချုပ်ကား ထိုးထားပြီး
ရဲများ စည်ပင်များ မှ ခရီးသွားသူများကို စစ်ဆေးနေပါတယ်။
လမ်းသွားရင်း အမှိုက်ပစ်တာတွေ ဆေးလိပ်သောက်တာတွေ (ဆေးလိပ်တို စွန့်တာတွေ)
ကွမ်းတွံထွေး ထွေးသူတွေကို စစ်ဆေးပြီး ဒဏ်ငွေရိုက် ၊ အထောက်အထား ဘာမှ မရှိရင်
ကားပေါ်ခေါ်တင် စတာတွေ လုပ်နေပါတယ်။
ကွာလာလမ်ပူရှိ စားသောက်ဆိုင်များကိုလည်း ဆိုင်လိုင်စင် ၊ နှင့် စည်ပင်လိုင်စင်
အထောက်အထားများ စစ်ဆေးမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ တာဝန်ရှိသူများမှ လမ်းတစ်လျှောက် ဆိုင်များ ခရီးသွားသူများကို
ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းမှာ ရိုက်လံရိုက်ကူးနေပါတယ်။
(ယခုလက်ရှိ ၃း၁၅ မီနစ် အချိန်တွင် ပြီးဆုံးသွားပါပြီ)
ဖုန်းရောင်းတာတွေ ဝယ်တာတွေ ဂရုစိုက်ပါ။ နေ့စဉ် အလိမ်ခံရနေပါတယ်။
ဒီတော့ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရလေအောင်
အကြံပေး သတိပေး ဒါတွေပဲ လုပ်နေရပါတယ်။
အနည်းဆုံးလုပ်ခ တစ်ရက် ၅၆၀၀ ကျပ်ပေးရန် လုပ်သားများတောင်းဆို လုပ်ငန်းရှင်များ ၂၀၀၀ ကျပ်သာ ပေးလို
ရန်ကုန်- လက်ခစားလုပ်ငန်းများ (CMP)မှ အလုပ်သမားအများစုက အခြေခံလုပ်ခလစာကို တစ်ရက်လျှင် ၅၆၀၀ ကျပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးအောင်ကပြောသည်။
အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ နည်းဥပဒေထွက်ရှိပြီးနောက် နှုန်းထားသတ်မှတ်နိုင်ရန် ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် နှုန်းထားသတ်မှတ်ရန်အတွက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တို့အား သီးခြားတစ်လှည့်စီ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် အစိုးရကထပ်မံ၍ လုပ်ငန်းတူမှ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို တွေ့ဆုံရာတွင် (CMP) လုပ်ငန်းကို ဦးဆုံးအဖြစ် နိုဝင်ဘာ၂၂၊ ၂၃ ရက်တို့တွင် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုသို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများမှ လုပ်သားများက တစ်ရက်လျှင် အခြေခံလစာငွေ ကျပ် ၂၅၀၀ မှ ၅၀၀၀ ကျော်အထိ သတ်မှတ်ပေးရန်
တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အလုပ်ရှင်များက အခြေခံလစာငွေ တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၁၀၀၀ မှ ၂၀၀၀ ကျော်အထိ သတ်မှတ်ပေးရန် ပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
“အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကတော့ ၀င်ဝင်ချင်း နှစ်ထောင်ပေးမယ်။ သူတို့အလုပ်အပေါ် ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ပေးမယ်။ အလုပ်သမားတွေဘက်ကလည်း ၀င်ဝင်ချင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါးထောင်လောက်လိုချင်တယ်။ ငါတို့ကတော့ အလုပ်သမားတွေအတွက် သူတို့ဘ၀လူနေမှုဖူလုံတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ ပေးချင်တယ်။ အလုပ်သမားက လေးထောင်တောင်းလို့ ကြားကနေ သုံးထောင်လို့သတ်မှတ်ပေးလို့မရဘူး။ အဲဒီလိုသတ်မှတ်ရင် အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကလည်း မပေးနိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမျိုးအောင်ကပြောသည်။
ထို့အပြင် နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှအပ အခြားလက်ခစားလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် အအေးခန်း၊ ဖိနပ်၊ ဆံပင်တု စသည့်စက်ရုံများမှ အလုပ်သမားအများစုက အနိမ့်ဆုံးအခြေခံလုပ်ခလစာငွေ တစ်ရက်လျှင် ၄၅၀၀ မှ ၅၆၀၀ ကျပ်အထိ သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး လက်ရှိပြည်တွင်းလုပ်သားများအတွက် အနည်းဆုံးအခြေခံလစာငွေ နှုန်းထားထွက်ရှိနိုင်ရန် ဆွေးနွေးမှုတွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အပြိုင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလျက်သာရှိသေးပြီး အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာနှုန်းထား အတည်ပြုသတ်မှတ်နိုင်ရန် ဒုတိယအဆင့်သာ ရှိသေးသည်။
လုပ်သားများအနေဖြင့် တစ်ရက်လျှင် လုပ်ခလစာငွေ ကျပ် ၅၆၀၀ တောင်းဆိုရခြင်းသည် လက်ရှိကုန်ဈေးနှုန်းအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ စားဝတ်နေရေးပြေလည်ရန်အတွက် တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ အခြေခံလုပ်ခလစာနှုန်းထားသတ်မှတ်ရန် နည်းဥပဒေထွက်ရှိပြီး သုံးလအကြာတွင် စတင်ခဲ့ပြီး အဆင့်ငါးဆင့်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့အပြင် လက်ရှိလုပ်သားများ ရရှိနေသည့် လုပ်ခလစာဝင်ငွေနှုန်းနှင့် တစ်နေ့ကုန်ကျလျက်ရှိသည့် ကုန်ကျငွေသိရှိနိုင်ရန် စစ်တမ်းကောက်ခံမှုကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာဖွံ့ဖြိုးမှုအရင်းအမြစ်အဖွဲ့ (MDR)အဖွဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်(ILO)နှင့်ပူးပေါင်း၍ စတင်ကောက်ခံတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အနည်းဆုံးအခကြေးငွေနှုန်းထား သတ်မှတ်မှုပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ (MIRD)အဖွဲ့မှ အကြီးတန်းသုတေသနပညာရှင် ဒေါက်တာအောင်သူငြိမ်းက “အလုပ်သမားနဲ့ သူ့မိသားစု လူတန်းစေ့နေနိုင်တဲ့ လစာပေ့ါ။ ဒါတွေတွက်ချက်ဖို့ စဉ်းစားသင့်တယ်။ မိသားစုဆိုတဲ့နေရာမှာ အနည်းဆုံးလေးယောက်လောက်လို့ မှန်းပြီးတွက်ပါတယ်။ အာဟာရချို့တဲ့မှုမျိုးမဖြစ်အောင် ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်မြောက်အောင်အတွက်လည်း စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
• ယောက်ျား+ယောက်ျား လိင်တူဆက်ဆံသူတွေ၊ မူးယစ်ဆေးထိုးသူတွေ၊ လိင်နဲ့အသက်မွေးသူတွေဟာ လေ့လာမှုတွေလုပ်ရာမှာ ဖုံးကွယ်နေကြလို့ အခက်အခဲရှိတယ်။ သူတို့ကနေ ဆေးကုသမှုယူရတာမှာလဲ တားဆီးမှုတွေ ရှိနေတယ်။
• ဦးစားပေးတိုင်းပြည် ၁ဝ ခုထဲမှာ ကလေး ၁ဝ ယောက်မှာ ၃ ယောက်သာ ဆေးရနေတယ်။ ၂ဝ၁၂ နှစ်ထဲမှာ ပိုးရှိတဲ့ အသက် ၁၅ နှစ်အောက်ကလေးပေါင်း ၆၄၇ဝဝဝ သာဆေးရနေတယ်။
• ကလေးတွေဆေးရရှိမှုဟာ ၃၁-၃၉% ရှိတယ်။ ၂ဝ၁၁ နဲ့စာရင်တော့ ၁၄% တက်လာပါတယ်။
• လူကြီးတွေ ဆေးရရှိမှုဟာ ၆၁-၆၉% ရှိတယ်။ ၂ဝ၁၁ နဲ့စာရင်တော့ ၂၁% တက်လာပါတယ်။
• အသက် ၅ဝ ကျော်တွေမှာ ပိုးတွေ့ရှိမှုတိုးလာနေတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ အသက် ၅ဝ ကျော် ပိုးရှိနေသူ ၃့၂-၃့၉ သန်း ရှိတယ်။
• တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂ဝ၁၂ စာရင်းအရ ပိုးရှိသူအသစ်ပေါင်း ၂့၃ သန်းရှိတယ်။ ၂ဝဝ၁ နဲ့စာရင်တော့ ၃၃% ကျလာတယ်။ ကလေးတွေမှာလဲ ၅၂% လျော့နည်းလာတာဖြစ်တယ်။ သေဆုံးသူကလဲ ၃ဝ% ကျဆင်းတယ်။ ၂ဝဝ၅ တုံးက အများဆုံးသေဆုံးခဲ့ရတယ်။
• ၂ဝ၁၂ အကုန်မှာ ဝင်ငွေနည်းနဲ့ ဝင်သွေမများတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဆေးရရှိသူအရေအတွက်ကို ၉့၇ သန်း ရှိအောင် ရည်မှန်းထားခဲ့တယ်။
• HIV နဲ့ TB တွဲဖြစ်နေသူတွေရဲ့ သေဆုံးမှုက ၂ဝဝ၄ ကနေတွက်ရင် ၃၆% ကျလာတယ်။
• တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂ဝ၁၂ စာရင်းအရ ပိုးရှိသူစုစုပေါင်း ၃၅့၃ (၃၂့၂ - ၃၈့၈) သန်း ရှိတယ်။ ၁့၆ (၁့၎ - ၁့၉) သန်းမှာ AIDS နဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေရှိနေကြတယ်။
• HIV ပိုးရှိနေသူပေါင်း ၉၈၄ဝဝ ယောက်ထုက ၂၁၉ဝဝ ယောက်ဟာ သူတို့မှာ ပိုးရှိနေတာကို မသိကြ။
• မနှစ်ကထက် ၁% တိုးလာတယ်။
• ၂ဝ၁၂ နှစ်ထဲမှာ လူနာသစ်ပေါင်း ၆၃၆ဝ ရှိလာတဲ့အထဲက ၄၇% ဟာ ရောဂါနောက်ပိုင်းအဆင့်ရောက်လာမှ ပိုးရှိနေတာကိုသိကြရတယ်။
• ပိုးရှိနေသူတွေထဲက ၄၅% ဟာ လိင်တူဆက်ဆံသူတွေဖြစ်တယ်။ ၂၈၈ဝ ယောက်ထဲမှာ လိင်တူယောက်ျားက အများဆုံးဖြစ်တယ်။
ဦးအောင်မင်း(ကချင်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း) မှ အများပိုင်ကိုမြေကို သိမ်းဆည်းထားရာမှ ရပ်ကွက် ပြည်သူများနှင့် အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပွား
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ အေးမြသာယာ ရပ်ကွက်တွင် ယခင်အစိုးရ လက်ထက်က ဆေးပေးခန်း မြေနေရာ အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သော မြေယာအား လက်ရှိအစိုးရ တက်ရောက်ရန် ကူပြောင်းစဉ်ကာလအတွင်း ဦးအောင်မင်း(ကချင်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း) မှ ၄င်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချပြီး ပြည်သူပိုင် ဆေးပေးခန်းမြေနေရာအား တရားမ၀င်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
ထိုမြေနေရာအား ဦးထွန်းကျော်(ပမ္မတီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)အား ခြံစည်းရိုးများ ကာရံစေကာ ပုပ္ပလိကပိုင်ပြုလုပ်ပြီး ရောင်းချရာ မှ ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများနှင့် ယနေ့ ၂၃.၁၁.၂၀၁၃ရက် ၊ နေ့လည်ခင်းတွင် အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လက်ရှိ ဖြစ်သွားနေသော ပြသနာများကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့ကလဲ တိကျသော ဖြေရှင်းချက်ကို မဖြေရှင်း နိုင်သေးကြောင်းလဲ သိရှိရပါသည်။
လုပ်သားပြည်သူများ၏ ယာဉ်စီးခ မှန်ကန်စွာဖြင့် စီးနင်းသွား လာနိုင်ရေး (ပေးစာ)
ကျွန်တော်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ အင်းစိန်လမ်းမ ၊ဘာတာမှတ်တိုင် ၊ ရှိမီးသတ်ဦးစီးဌာန (လှိုင်မီးသတ်စခန်း)မှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးပါ။
ကျွန်တော်နေထိုင်ရာ သမိုင်းလမ်းဆုံမှနံနက် အလုပ်ဆင်းလျှင် ၃မှတ်တိုင်အကွာ ဘာတာမှတ်တိုင်(အင်းစိန်လမ်း) ကို ဘတ်စ်ကားခ (၅၀ ကျပ်) ဘဲပေးရပါတယ်။ နေ့လည်ထမင်းစားချိန်အိမ်ပြန်စားရင်လဲ (၅၀ ကျပ်) ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ညဖက် ၆ နာရီခွဲခန့် လှိုင်မီးသတ်မှ သမိုင်းလမ်းဆုံမှတ်တိုင်သို့ ၅၀/ကျပ် ရိုးရိုး လိုင်းကားများစောင့်စီးရာမှ (ယဉ်လိုင်းအားလုံးမှ) စပယ်ယာများက ၅၀ ခရီးကို ၁၀၀ ကျပ်တောင်းပါတယ်။
၅၀ ခရီးကို ၁၀၀ တောင်းလို့ပြောတဲ့သူရှိရင်စပယ်ယာမှရိုင်းစိုင်းစွာအော်ဟစ်ငေါက်ငမ်းပါတယ်။
''ခင်ဗျားတို့ကိုမတက်ခင်တည်းက ဟိုနားဒီနား ၁၀၀ ပြောပြီးသား ၊ မစီးနိုင်ရင်ပြန်ဆင်း'' စသည့်ဖြင့်ပြောဆိုပါတယ်။ ခရီးသည်များမှာလည်း တနေ့လုံးအလုပ်ပင်ပန်းပြီးပြန်လာသူ လက်လုပ်လက်စားနှင့်ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြကာ စကားနဲရန်စဲ သဘောမျို့း ၁၀၀ ပေးစီးနေကြရသည်မှာ လချီ ရှိပါပြီ။ ထို့ပြင်အလုံ ၊ ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်မှလာသောမှော်ဘီ ၊ တိုက်ကြီး ဟိုင်းလတ်ကားများမှာလည်း ၅၀ ခရီးကို ၁၀၀ ၊ ၁၀၀ ခရီးကို ၂၀၀ ယူနေကြသည်မှာ ၅ နှစ်ခန့် ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ ၅၀ ခရီးကို ၂၀၀ စတင်ယူနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်သောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်လိုင်းကား ၊ ဘတ်စ်ကားဖြင့် ခရီးသွားလာ နေကြသော လုပ်သားပြည်သူများ၏ ယာဉ်စီးခ မှန်ကန်စွာဖြင့် စီးနင်းသွားလာနိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာမှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
၁၂ ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်မြို့နယ်
ဆံကေသာကို နက်မှောင်ပြီး တောက်ပလာစေမယ့် လက်တွေ့နည်းများ
ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖြောင့်စင်းနေစေဖို့ အိမ်မှာပဲ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း...တွေ ရှိပါတယ်။ သင့်အိမ်မီးဖိုချောင်မှ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တာတွေကို အသုံးပြုပြီး သင့်ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖြောင့်စင်းအောင် လုပ်ကြည့်ပါ။
- အုန်းသီးကိုခြစ်၊ အရည်ညှစ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၄၅ မိနစ်ကြာ ထည့်ထားပါ။
- အဲဒီနောက် ရေခဲသေတ္တာထဲက ထုတ်ပြီး အုန်းနို့အပေါ်ယံမှာ စုနေတဲ့ ခရင်မ်ကို ခပ်ယူပါ။
- အဲဒီခရင်မ်ထဲကို သံပရာအရည် သုံးစက်ထည့်ပြီး သေချာစွာ ရောမွှေပေးပါ။
- ရလာတဲ့ အရောအနှောကို ဦးရေပြားပေါ်လိမ်းပြီး ခေါင်းစွပ်စွပ်ထားပါ။
- တစ်နာရီလောက်ထားပြီးမှ ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။
- နွာနို့တစ်ခွက်ထဲကို ပျာရည်တစ်ဇွန်း ထည့်ပါ။
- စတော်ဘယ်ရီသီး အနည်းငယ်ကို ခြေထည့်ပြီး အားလုံးကို နှံ့အောင် သေချာစွာ ရောမွှေပေးပါ။
- ရလာတဲ့ အရောအနှောကို ဆံပင်ပေါ် သုတ်လိမ်းပြီး အခြောက်ခံထားပါ။
- နှစ်နာရီကြာတဲ့အခါ ရှမ်ပူနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။
- နွာနို့က ဆံပင်ဖြောင့်စင်းဖို့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ နွားနို့ကို ဖျန်းလို့ရတဲ့ ပုလင်းထဲထည့်ပြီး ဆံပင်ပေါ်ကို ဖျန်းပေးပါ။
- အဲဒီနောက် ဆံပင်ကို ရှမ်ပူနဲ့ လျှော်ပါ။
- ဆံပင်တွေ ရေစိုနေတုန်းမှာ ညင်သာစွာ ဘီးနဲ့ဖြီးပါ။
- သံလွင်ဆီကို အနည်းငယ် အပူပေးပြီး ဆံသားအားလုံးအနှံ့ လိမ်းပေးကာ ဦးရေပြားကို ညင်သာစွာ နှိပ်နှယ်ပေးပါ။
- အဲဒီနောက် တဘက်နဲ့ ခေါင်းပေါင်းပြီး နာရီဝက်ကြာမှ ခေါင်းလျှော်ပါ။
- ဆံသားကို တောက်ပြောင်စေရုံ သာမက အရှည်မြန်စေပါတယ်။
Thanks to ချိုးငှက်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲအတွက် SEA Games က အထောက်အကူ ဖြစ်မည်ဟု သူရဦးရွှေမန်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံက နှစ်ပေါင်း ၄၄ နှစ်အကြာမှ ပြန်လည် ကျင်းပခွင့်ရသည့် SEA Games ပြိုင်ပွဲသည် ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးတွင် အထောက်အကူတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ သူရဦးရွှေမန်းသည် (၂၇) ကြိမ်မြောက် SEA Games ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် လက်ရွေးစင် ကစာသမားများကို နေပြည်တော်ရှိ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ အားကစားကွင်း၌ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်က ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လာရောက် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
SEA Games ပြိုင်ပွဲကြီးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်ပေးကာ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို အထောက်အကူ ပြုကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနှင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများကို အမီလိုက်နိုင်ရန် စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း အားလုံး ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ ပြည်သူလူထုကို အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲက ထလော့ မြန်မာဟု နိုးကြားပေးစေနိုင်သည်ဟု ၎င်းကပြောဆိုခဲ့သည်။
လက်ရွေးစင် ကစားသမားများ အနေနှင့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို အောင်နိုင်စိတ်ထက် အားကစား စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးဘဲ စည်းကမ်းရှိရှိ တရားမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်သင့်ကြောင်း၊ မြန်မာ တစ်မျိုးသားလုံးအတွက် အောင်မြင်မှုများ ရရှိအောင် ကြိုးစားပေးစေ လိုကြောင်းလည်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားခဲ့သည်။
အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခွင့်ရသည့် (၂၇) ကြိမ်မြောက် SEA Games ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနှင့် နိုင်ငံအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် ထိပ်ဆုံးနေရာမှ အဆင့်သုံးအတွင်း ရရှိရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း၊ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယခုပြိုင်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးပင် ဖြစ်ကြောင်း အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှ ဆိုင်အလုပ်သမား အရွယ်မရောက်သေးသော မိန်းကလေးငယ်အား ခိုးမှုကျုးလွန်ခိုင်းသောဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွား
ဟင်္သာတ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ ဦးပါရဲစေတီတော် ဈေးဆိုင်တန်းတွင် ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှ ဆိုင်အလုပ်သမားအရွယ်မရောက်သေးသော မိန်းကလေးငယ်ကို တခြားဆိုင်မှ ပစ္စည်းများကို ခိုးယူစေရန် ခိုင်းစေမှု (၁၇-၁၁-၂၀၁၃) တော်သလင်းလပြည့်နေ့ ညပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ တော်သတလင်းလပြည့်နေ့ည၌ ဒေါ်ဝင်း အသုတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် သူ၏ဆိုင်အလုပ်သမား အရွယ်မရောက်သေးသော မိန်းကလေးငယ်ကို ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းကျော်ရှိဆိုင်မှ ပစ္စည်းများကို ခိုးယူရန် ခိုင်းစေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခိုးယူခံရသောဆိုင်သည် တာဝန်ရှိသူများကိုတိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် တာဝန်ရှိသူများမှ မသင်္ကာသူများကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာ အရွယ်မရောက်သေးသော မိန်းကလေးငယ်က မိမိအား ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှ ခိုးယူခိုင်းသောကြောင့် ခိုးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ခိုးရာပါပစ္စည်းများကိုလည်း ဆိုင်ပိုင်ရှင်၏နေအိမ်တွင်ပင် ထားရှိကြောင်း (၂၂-၁၁-၂၀၁၃)နေ့တွင် ထွက်ဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ဟင်္သာတမြို့ အမှတ်(၁)ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည် အသိသက်သေများလိုက်ပါလျှက် အဆိုပါခိုးမှုကျုးလွန်ရန်ခိုင်းစေခဲ့သော ဆိုင်ပိုင်ရှင်၏နေအိမ်သို့ သွားရောက်ရှာဖွေရာတွင် ခိုးရာပါပစ္စည်းများကို ဆိုင်ပိုင်ရှင်၏နေအိမ်အတွင်းတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှလည်း မိမိသည် ကလေးငယ်အား ခိုးမှုကျုးလွန်ရန် ခိုင်းစေခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများရှေ့မှောက်တွင် ၀န်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည်။
ထိုဆိုင်ခန်းများတွင် ပစ္စည်းပျောက်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပြီး၊ ဘုရားကြီးပရ၀ဏ်အတွင်းရှိ အလှူခံပုံများလည်း မကြာခဏပျောက်ဆုံးလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးငယ်အား ခိုးမှုကျုးလွန်ရန် ခိုင်းစေခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်၏ အကျင့်စာရိတ္တကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးရာရောက်စေသဖြင့် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်ကြောင်း မြို့ခံများက ပြောဆိုသည်။
(ပေးပို့သူ- ဟင်္သာတ မီဒီယာအဖွဲ့)
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် နီးကပ်စွာ နေသော်လည်း မည်သည့်ပါတီကိုမှ ဘက်လိုက်မည် မဟုတ်ဟု ဦးတင်အေးဆို
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် နီးကပ်စွာ နေခြင်းကြောင့် ဝေဖန် ခံနေရသော ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် နီးကပ်စွာ နေလေ့ ရှိသော်လည်း မည်သည့် ပါတီကိုမျှ ဘက်လိုက်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပန်ဒါဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်ရှင် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ၎င်းက ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလသို့ ရောက်ရှိရန် တစ်နှစ်ကျော်ကျော်သာ လိုတော့သည့် အချိန်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌတို့ ပူးပူးကပ်ကပ် နေလေ့ရှိနေသည့် အချက်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်အချို့က ဝေဖန် ရေးသားခဲ့မှုကို ၎င်းက ယင်းသို့ ပြန်လည် တုံ့ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခင်မင်တာပါ။ ခင်မင်တာနဲ့ ဘက်လိုက်တာနဲ့ တခြားစီပဲ။ အားလုံး ဥပဒေအောက်ကပဲ သွားနေတာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် နီးကပ်စွာ နေခြင်းသည် မိတ်ဆွေအဖြစ် ခင်မင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပါတီနိုင်ငံရေး လုပ်ခြင်း မဟုတ်သောကြောင့် ဘက်လိုက်စရာ အကြောင်း မရှိဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ဆိုသည်။
“နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရင်းနှီးမှုကို ကြည့်ပြီး ဘက်လိုက်ခြင်းရှိ မရှိ ပြောလို့မရဘူး။ အဲလို ပြောစတမ်းဆို ဘယ်သူမှလွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပါတီလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အနေနှင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းပြီး လွှတ်တော်က ထောက်ခံ ခဲ့သောကြောင့် ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဟိုင်ယန် မုန်တိုင်းသင့်သူများကို ကူညီမယ့် One Direction အဆိုတော်အဖွဲ့
လူအများ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အရေးအသားတွေကြောင့် ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်မယ်၊ တရားစွဲမယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်ဦးတေဇရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ကို ဖတ်ပြီး စာဖတ်သူတွေက မှတ်ချက်အမျိုးမျိုး ပေးနေကြပါတယ်။
၂၀၀၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းကတွေ့ရသော ဦးတေဇ နှင့် သားနှစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ- ဧရာဝတီ)
စာဖတ်သူတို့ရဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ကြည့်ရင် ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် အမြင်မတူမှုတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ အထင်အရှား တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဧရာဝတီ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ တင်ခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်များထဲက တချို့ကို မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သူရိနေဝန်းလိုပြောရဲ ဆိုရဲတဲ့ဂျာနယ်မရှိခဲ့လို တိုင်းပြည်ကို သူတို့ ချယ်လှယ်ချင်တိုင်း ချယ်လှယ်ခဲ့ကြတာ... မီဒီယာကျင့်ဝတ် မညီဘူးပြောတဲ့သူတွေ အစိုးရသတင်းစာတွေမှာဒေါ်စုကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းရေးခဲ့တုန်းက ခင်ဗျားတို့တွေဘာကြောင့် အသံမထွက်ခဲ့ကြတာလဲ???
စွဲသင့်တယ် ဒါမှ မဟုတ်မမှန်တာတွေ မ ရေးရဲတော့ မှာ ဒင်းတို့ ကဒီမိုက ရေစီ အ ကြောင်းပြု ပြီး သူတို့ ဂျာနယ်ရောင်းကောင်း အောင် လုပ်နေတာ လူဆိုတာသိက္ခာ နဲ့ နေတာ သူတို့ အတွက်အနင်းခံလှေခါးထစ်မဟုတ်ဘူး
ကျင့်ဝတ် ဆို တာ လုပ် ငန်း အာ လုံး မှာ ရှိ တယ်...တိုင်း ပြည် ကို ဖျက် ဆီး ခဲ့ တာ က ကော ဘာ ကျင့် ၀တ် နဲ့ လဲ....ဘာ ဗ မာ လူ မျိုး မို့ လို့ ကြည့် ရ မှာ လဲ...လုပ် ခဲ့ ရင် ခံ ရ ဖို့ တာ ပြင် ထား ..အဲ ဒါ လော က ဓံ တ ရား...မှတ် ထား.... သူ ရိ ယ နေ ဝန်း သ တင်း စား အ များ ပိုင် လုပ် ရင် ရှယ် ယာ ၀င် မယ်...။
ဦးတေဇ ချမ်းသာတာ တို့တော့ ဝမ်းသာတယ် ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်နေလို့ပါ ကျောက်စိမ်းတို့ ကျွန်းသစ်တို့ ဘိန်းတို့လုပ်ပြီး မန်းမြို့ကို သိမ်းထားတဲ့ တရုတ်ကုလားကို ဖော်ထုတ်ရေးပါလား ကိုမိုးဟိန်း မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် သိပ်ထက်သန်နေရင် ဂျာနယ်ရောင်းကောင်းတော့ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း သိက္ခာမချသင့်ပါ
မီဒီယာကျင့်ဝတ်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး ရေးထားတဲ့စာတွေကလဲ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဘာတစ်ခုမှ ဗဟုသုတရစေမဲ့ အကြောင်းအရာတွေမပါဘူး ဒီလိုဂျာနယ်မျိုး ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ၀ယ်မဖတ်တော့ဘူး လူစိတ်ဝင်စားပြီး ဂျာနယ်ရောင်းအောင်းတတ်အောင်ရေးထားတဲ့ မီဒီယာအရေခြုံတွေပဲ ။ ဘယ်သူဘက်မှမပါပါ စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ပြောရဲတဲ့လူရှိလို့အကြောင်းစုံသိရတာ ပြည်သူလူထုဒါထက်ပိုသိအောင် ဆက်ပြောပါ
ဗမာဗမာခြင်း တိုက်ခိုက်၊ အတင်းတုပ်၊ တလွဲဆန်ပင်ကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တာ ပြန်အောင့်မေ့တယ်။ တကယ်ဆို ဗမာဗမာခြင်း ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဆဲဆိုနေတာတွေ ရပ်တန်းက ရပ်သင့်တယ်။ လေးစားမှုမရှိ၊ မစဉ်းစား မဆင်ခြင် ပညာမတတ် အောင်တန်းစား စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်တွေ များလာတာနဲ့အမျှ တိုင်းပြည်မတိုးတက်ရင် အစိုးရမကောင်း၊ ခရိုနီမကောင်းလို့ သင်ပေးသမျှ ထိုင်အော်နေတတ်သမျှတော့ ဘယ်တော့မှမတိုးတတ်ဘူး။
ခိုင်လုံတဲ့အထောက်ထားတွေ နဲ့ တရားပြန်စွဲနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.... သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ် အနေနဲ့ လဲ.. ရန်စွယ်နဲ့ ငေါငေါ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်တွေ ကို နဲနဲလျော့ သင့်ပါတယ်...
အခုလေးတင်ပဲ အဲ့ဒိပုံနဲ့ ဂျာနယ်ဖတ်လာတာပါ အထဲမှာ တော်တော်ကို ဖွထားပါတယ်... မီဒိယာမှန်ရင် အကြောင်းကိစ္စ အားလုံးအတွက် ပြည်သူ့လူထုကို အမှန်အတိုင်း ရေးပါ ချပြပါ..... ဒီဂျာနယ်ရေးထားတာ တဖက်သားကိုတော်တော် ထိခိုက်စေပါတယ်...... တရားဆွဲပါ အားပေးတယ်...
မိုး ဟိန်း က လည်း အ စွယ် ချွန် လို့နယ် ကျွံ လာ တာ နေ မှာ ပေါ့န ဂို က တည်း က ခ ရို နီ တိုက် ဖြတ် မယ် လို့ကြွေး ကျော် ပြီး ဝင် လာ တဲ့ဂျာ နယ် ဘဲ လေ အား ပေး နေ မယ် သူ ရိ ယ နေ ဝန်း ရေ